things wht i've seen, wht i've felt, wht i've tot changed to...: 2009
rain, thunder, lightning,
lonely, messy, windy, dark.
God, save me! save me!!
Posted by sweetpeony at 1:27 PM4comments:
raindrops on my roofs,
teardrops in my eyes as well,
Posted by sweetpeony at 1:10 PM 8 comments:
burning me my fire,
as long as you can be bright,
let this candle melt.
Posted by sweetpeony at 1:11 PM6comments:
What is your name : Sweetpeony
A four Letter Word : Snow
A boy's Name : Sean
A girl's Name : Salina
An occupation : Squire
A color : Shimmer green
Something you'll wear : Sense's blouse
A food : Spaghetti
Something found in the bathroom : Sponge
A place : Somewhere I belong
A reason for being late : Season sales!!
Something you'd shout : So messy!!!!
A movie title : Sixth Sense
Something you drink : Sugar Cane
A musical group : Second hand senerade
A street name : Sims Ave (Sg)
A type of car : Saturn amp electric
The title ofasong : Somewhere over the rainbow
A verb : Smile!!!
ဆက်တက်ဂ်လိုက်ပါဦးမယ်... အဆင်ပြေရင် ရေးပေးကြပါကုန်....
Nway Nay Chi
Posted by sweetpeony at 10:10 PM4comments:
that plucks its spines from its body
Cause it loves YOU so.
Posted by sweetpeony at 10:34 PM 15 comments:
တိမ်စတချို့  ခပ်ဝေးဝေးလွင့်သွားပြီ
ဆွံ့အ စွာ ..........။
အနီရဲရဲ ဒဏ်ရာတချို့ 
တုပ မထားတဲ့ ခံစားချက်တွေ
ပုံ ပျက် ပန်း ပျက် ............။
Posted by sweetpeony at 11:45 AM 13 comments:
၁၈) ၀က်သားပေါင်း နဲ့ ပဲအချိုရည် (လသာ လမ်း၂၀ထိပ်)
၃၁) ဗာဒံစေ့လှော် (စကော့ဈေး)
၃၃) ထောပတ်ဘိန်းမုန့် (ရေကျော်)
၃၄) ဒိန်ချဉ်ပူတင်း (ရွှေပုစွန်)
Posted by sweetpeony at 11:06 PM 15 comments:
အသားပါ ရနိုင်သေးတယ် .....။
ဒီ - မျှော်လင့်ချက်ရဲ့ နံရိုးတစ်ချောင်းဟာ
ငါ - မဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ
ပစ္စုပ္ပန်ကို မေ့ သွား ဖို့ အ တွက် .....။
Posted by sweetpeony at 3:19 PM5comments:
come, go, eat, sit, speak
do nothing unless you say
how bitchy she is.
sori teacher i noe haiku shdn'tblike this but i've aldy done. u'll definately scold me if u've read it.
Posted by sweetpeony at 12:03 PM2comments:
Nothing but just missing YOU
Nothing but just missing you....
Nothing but just missing you when I sawafamily with two daughters came in to the train and thought that that father was like you who had two daughters.
Nothing but just missing you when I heard they were talking about coming back from somewhere and it reminded me of our nightouttings.
Nothing but just missing you when I saw the older daughter talked to her father with holding hands like I did.
Nothing but just missing you when I recognized that the older daughter really looked like her father.
Nothing but just missing you when all the way their movements took me back to you.
just missing you, DADDY.
Posted by sweetpeony at 5:00 PM 1 comment:
Posted by sweetpeony at 5:39 PM4comments:
Father's Day အလွဲ
`ပါပါး happy father's day..........´
`ဟ.... ဒီနေ့က father's day လား။ ငါတောင်မမှတ်မိဘူး။ မင်းကမှတ်မိတယ်။´
`အင်း .. မှတ်မိတာပေါ့။ မှတ်ထားတာ။ အဲဒါကြောင့်ဖုန်းဆက်တာ´
`အေး အေး မင်းဘာလုပ်နေလဲ။ စားပြီးပြီလား။ အဆင်ပြေလား။´
`စားပြီးပြီ။ ပြေပါတယ်။ ပါပါးကော စားပြီးပြီလား။ အပြင်ထွက်တော့မှာလား။´
`အေး.. အကြီးမ... ဟ.... မင်း father's day က ရောက်လာပြန်ပြီလား´
`ဟီးဟီး... ဟုတ်ဘူး.. ဟိုတပတ်ကမှားသွားလို့.. father's day မှတ်လို့... မှတ်တာမှားသွားတာ.. ဒီတပတ်မှအမှန်.. အဲဒါကြောင့်ဖုန်းထပ်ဆက်တာ.. ဟီးဟီး...´
`အော်... မင်းကလဲ...... မသိပါဘူး.. ငါက မင်း father's day က တစ်နှစ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် လုပ်နေတာလဲလို့´
သမီးတွေကို သားတွေလိုပဲ မင်း နဲ့ ငါ နဲ့သာ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သော အဖေနှင့် father's day အမှတ်တရ။
Posted by sweetpeony at 9:06 PM5comments:
` သူ့ ကျေးဇူးကို မှတ်ထားပါ၊ကိုယ့်ကျေးဇူးကိုမေ့ပစ်ပါ ´တဲ့။ ဒီစကားတယ်ပြီး ဘ၀မကျချင်ဘူး။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အခန့် မသင့်လို့ စကားများကြတဲ့အခါများ သူ့ ကျေးဇူးတွေ ပြောသွားလိုက်တာများ တန်းစီလို့ ။
ကိုယ့်မှာတော့ မှတ်ထားစရာလို့ မထင်တာတွေ မေ့ပစ်လိုက်လို့ ပြောစရာမရှိဘဲ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ။
ငါလည်းကူညီဖူးတာပဲ ဆိုတာကလွဲရင် ကျန်တာ ခေါင်းထဲက ထွက်မလာတော့။ ပါးစပ်ကလဲ ထွက်မလာတော့။
Posted by sweetpeony at 10:09 AM2comments:
love, cares, times, kindness
you sacrifice, i survive.
Posted by sweetpeony at 1:54 PM No comments:
Labels: Mothers' day, MY HAIKU
တွေ့ ဖူးချင်တဲ့သူ ၁၀ ယောက် တဲ့
မနော်က tag ထားတယ်တဲ့။ သွားကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းစဉ်က တွေ့ ဖူးချင်တဲ့သူ ၁၀ ယောက်တဲ့။ ဒါနဲ့ ပဲ ဘယ်သူတွေကို တွေ့ ဖူးချင်တာလဲ ဘာကြောင့်လဲလို့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်က တွေ့ ချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုတွေ့ ချင်ဦးမှ။ သူများတော့မသိ ကိုယ့်ကို မတွေ့ ချင်တဲ့သူကို ကိုယ်ကတော့ မတွေ့ ချင်ပါ။ တွေ့ ဖူးချင်တဲ့သူတွေကို သေချာစဉ်းစားပြီး ရေးလိုက်ပါတယ။် ကြည့်ပါလော့ -
၁) ခုစာကလေးကြော် ခုဆီထမင်း မဟုတ်သော သူမျိုးနှင့် တွေ့ ချင်ပါတယ်။
ဘလောင်း ဘလဲ အပြောင်းအလဲ မြန်တဲ့ သူမျိုး စိတ်ကုန်လွန်းလို့ ပါ။
၂) မျက်နှာဖုံးမစွပ်ထားသော သူမျိုးနှင့် တွေ့ ချင်ပါတယ်။
မျက်နှာများပြီး ရှေ့ တစ်မျိုး ကွယ်ရာတစ်မျိုးလုပ်တတ် ပြောတတ်သော သူမျိုးကို ဆက်ဆံရခြင်းဟာ အဆုံးစွန်ဆုံး ဆင်းရဲဒုက္ခကို ပေးလို့ ပါ။
၃) မကန်းသောသူမျိုးနှင့် တွေ့ ချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမြင်နိုင်ဘဲ သူများကိုသာ ပြောရန်သိသော အကန်းများကို ဆက်ဆံရန်ခက်လို့ ပါ။
၄) အားနည်းချက်ကို အသုံးမချတတ်သော သူမျိုးနှင့်တွေ့ ချင်ပါတယ်။
သူတပါး၏ အားနည်းချက်ကို ပြောင်လှောင် ပြောဆို ဆက်ဆံတတ်သော သူများက အထင်သေးစရာ ကောင်းလို့ ပါ။
၅) စင်းလုံးချောသော သူမျိုးနှင့် တွေ့ ချင်ပါတယ်။
အပြင်ပန်းလှပသလောက် အတွင်းလှိုက်စားပုပ်ပွနေသော အသီးနှင့် တူသောသူမျိုးသည် အပုပ်ကောင် ရုပ်ဆောင် ဝေးဝေးရှောင် ရမည့်သူ ဖြစ်လို့ ပါ။
၆) ဖို့ တစ်ဖို့ ထဲကိုသာ မကြည့်တတ်သော သူမျိုးနှင့် တွေ့ ချင်ပါတယ်။
ငါ့ဖို့ ၊ ငါ့အတွက်၊ ငါအဆင်ပြေမှ၊ ငါကောင်းဖို့ ၊ ငါ့အတွက်သာ စသဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိ၊ သူများအတွက်နည်းနည်းမှမကြည့်ဘဲ ကိုယ့်ဖို့ ကိုယ်သာ ကြည့်တတ်သူများကို စိတ်အပြန်တစ်ရာမက ပျက်လို့ ပါ။
၇) မရူးသော သူများနှင့် တွေ့ ချင်ပါတယ်။
သာပေါင်းညာစား ဘူးသီးသီးမှ အရီးတော် အလိုရှိမှ ခေါ်တတ်သော စိတ်မမှန် ရူးနှမ်းသော သူများနှင့် အခေါ်အပြော မလုပ်လိုလို့ ပါ။
ဟမ် ဟမ်... ၁၀ ယောက်တော့ မပြည့်ဘူး အမရေ။ ဒါနဲ့ ပဲ ကျေနပ်နော်။ ပထမဆုံး စရေးတဲ့ တက်ဂ်ပို့ စ်ကို ဖျစ်ညစ်ရေးထားတယ်။း) သူများတွေနဲ့ တော့ ရေးထားတာတူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တွေ့ ချင်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေပါပဲ။ တကယ်...။ နောက်တွေ့ ချင်တဲ့သူရှိမှ ထပ်ထည့်မယ်နော်။း)
သိတဲ့သူတွေကလဲ သိပ်မရှိဘူးဆိုတော့ ညီမောင် ကိုပဲဆက်တက်ဂ်မယ် ရေးလေရော့။ ;)
Posted by sweetpeony at 6:00 PM5comments:
မ.... ဘဲ နဲ့မ..... ပဲ
ဒါလေးကို မရေးတော့ဘူးလို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။ ခုတော့လည်းရေးဖြစ်သွားပြီ။ ဟိုတလောက ကိုညီလင်းဆက်ဘလော့မှာ မြန်မာစာ အမှားတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရေးထားတာ ဖတ်ရတော့ ငယ်ငယ်က မြန်မာစာဆရာမ၁ယောက် (နံမယ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ တီချယ်ရေ ခွင့်လွှတ်ပါ) ပြောတာကို သတိရသွားမိပြီး ရေးချင်သွားတယ်။ တချို့ ကမသိတာဖြစ်နိုင်တယ် တချို့ လည်းသိပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။
မြန်မာစာမှာရေးနေကြတဲ့ အငြင်းပုံစံဖြစ်တဲ့ မလုပ်ဘဲ၊ မစားဘဲ၊ မသွားဘဲ၊ မရောက်ဖြစ်ဘဲ၊ စတာတွေကို တော်တော်များများက မလုပ်ပဲ၊ မစားပဲ၊ မသွားပဲ၊ မရောက်ဖြစ်ပဲ၊ ဆိုပြီး မ...ပဲ ပုံစံနဲ့ သုံးကြတာတွေ တွေ့ ရတယ်။ မ.....ပဲ လို့ သုံးရတာလား၊ မ....ဘဲလို့ သုံးရတာလား ငယ်ငယ်တုန်းက ခွဲလို့ မရခဲ့ဘူး။ ခဏ ခဏမှားတယ်။ ဘယ်လိုမှ မမှတ်မိဘူး။ အဲဒါနဲ့အဲဒီမြန်မာစာ ဆရာမက မမှတ်မိနိုင်တဲ့ တပည့်တွေကို ` မှတ်ထား။ နင်တို့ က မ တွေ မ တွေနောက်ကို ဘဲ တွေလိုက်မှာပဲ။ မ နောက်ကို ဘဲ လိုက်တယ်။ မ ပါရင် ဘဲ ပါမှာပဲ။ မ မပါရင် ဘဲ မပါဘူး ´ တဲ့။း) အဲဒါနဲ့ ပဲ နောက်ပိုင်းတွေမှာ စာရေးရင် သတိထားပြီးရေးရေးလာတယ်။ ဒီတော့ အငြင်းပုံစံတွေကို မလုပ်ပဲ၊ မစားပဲ၊ မသွားပဲ၊ မရောက်ဖြစ်ပဲ ဆိုတာတွေ အစား မလုပ်ဘဲ၊ မစားဘဲ၊ မသွားဘဲ၊ မရောက်ဖြစ်ဘဲ လို့မ .... ဘဲ ပုံစံနဲ့ သုံးရမှာ မှတ်မိသွားတယ်။
ဒါကိုသိပြီးသားတွေလည်းရှိမှာပါ။ မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း ဗဟုသုတပေါ့။ ဒီပို့ စ်ကိုဖတ်ပြီး သူကကော ဘယ်လောက်တတ်လို့ လဲ။ ဘယ်လောက်တော်လို့ လဲ ဘယ်လောက်အမှားကင်းလို့ လဲ လို့မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာစာကို မတော်ပါဘူး။ ကောင်းကောင်းမသုံးတတ်ပါဘူး။ ပြုပြင်နေဆဲပါ။ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာတွေမှာလည်း မေ့သွားလို့ပြန်မဖျက်ချင်တော့လို့ စတာတွေကြောင့် အဲဒီ အမှားတွေရှိရင်ရှိနေမှာပါ။ ပြန်မပြင်ဖြစ်သေးပါ။ ဒီပို့ စ်လေးကလည်း အသိလေးတစ်ခုကို မျှပေးကြည့်ရုံပါ။
Posted by sweetpeony at 4:00 PM3comments:
သင်္ကြန်ပြီးသွားပြီ... နှစ်သစ်ရောက်လာပြီ... ချစ်ဖွယ့်လူသား လုပ်ကြစို့ ။
နှစ်သစ်အတွက် 100Plus ပေါ့။
၆တန်းတုန်းက သင်ဖူးတဲ့ ကဗျာလေး.. ခုထိမှတ်မိနေလို့တင်ထားလိုက်တယ်။
ကဗျာနံမည်ကတော့ ချစ်ဖွယ့်လူသား လို့ ထင်တယ်..။ ဟုတ်မှာပါ။
ဖန်ဖန်လေ အားအင်နှိုးလို့ ရယ်
အားလျော့ကာ ဆုတ်ချင်စမ်းပါနဲ့ 
ငှက်တေးကို အာရုံဆင်လို့ 
ဘေးမှာပုံလေးပါတယ်။ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဆင့်နေတဲ့ တောင်တွေပေါ် လူတစ်ယောက်တက်နေတဲ့ပုံ။ တောင်ဘေးမှာ ရေကန်လေး။ ငှက်ကလေးတွေကလည်း အနားမှာ သီချင်းဆိုပြီးပျံနေတဲ့ပုံလေး။
Posted by sweetpeony at 10:33 AM4comments:
ရောက်လာကြသူများ သင်္ကြန်ရွှေရင်အေးလေး သုံးဆောင်ကြပါ။ တနှစ်ပတ်လုံး ပူပန်ကင်းဝေး ရွှေရင်အေး စေကြောင်း ရည်ရွယ် ဆုတောင်းပါသည်။
Posted by sweetpeony at 12:00 AM3comments:
ပညာ ပညာ ပညာ
အနည်းဆုံးတော့ လျှာဖျားလေးနှင့်သာ စကားလှလှပြောတတ်သောပညာကို ရချင်ပါတယ်။
တပတ်ရိုက် ကျားကွက်ရွှေ့တတ်သော ပညာကိုလည်း သင်ကြားတတ်မြောက်ချင်ပါတယ်။
ပင်ကိုစိတ်ရင်းအတိုင်း မနေထိုင်တတ်စေရန် အတွေ့ အကြုံများက သင်ကြားပေးခြင်းလား။
လူတို့ သည် မျက်နှာဖုံးများစွာတပ်လျှက် ကခုန်နေကြသည်။
တယောက်နှင့်တွေ့ လျှင် တစ်မျိုးပြောင်းတပ်၏။
မျက်နှာကို မမြင်ရသော်ငြား မျက်လုံးများကိုမြင်နေရ၏။
ထိုသူတို့ည ည အေးချမ်းစွာ အိပ်ပျော်ပါရဲ့လား။
ထို့ အတွက် ထို အတတ်ပညာများလိုအပ်လေသည်။
သို့ သော်....... ကိုယ်က အေးချမ်းစွာ အိပ်ပျော်ချင်သူပါ။
ထို့ ကြောင့် သဟဇာတ မတဲ့စွာ ထိုင်ကြည့်နေရတော့သည်။
ထိုအခါ လှုပ်ရှားနေသူများ၏ တိုးတိုက်ခြင်းကို ရံဖန်ရံခါ ခံရတော့သည်။
မည်သို့ ဆိုစေ ထိုသူတို့ အလွန့် အလွန်တော်ကြပါသည်။
လျှာဖျားလေးနှင့်သာ စကားလှလှပြောတတ်သော ပညာကို တတ်မြောက်ထား၏။
တပတ်ရိုက် ကျားကွက်ရွှေ့တတ်သော ပညာကိုလည်း သင်ကြားတတ်မြောက်ထား၏။
ကစားနည်းတို့ အတွင် အလှဆုံးဖြစ်သော လူ လူချင်း စကားဖြင့်ကစားသောနည်းကိုလည်း တတ်မြောက်ကြလေသည်။
The sky is clear now.
Birds are singing, trees are green.
Making me feel fresh!
Posted by sweetpeony at 10:27 AM No comments:
Lake hid its diamonds,
revealed those by sparkling
when sunshine caught its.
Posted by sweetpeony at 9:48 AM No comments:
အေးတာကို အံ့သြစွာမုန်းတတ်နေပါလား.... ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့သြခြင်းများစွာနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ အရင်ကတော့ အဲဒီအေးတာကိုမှ ကြိုက်တတ်ခဲ့တာ... ပူနွေးတာကို မကြိုက်ဘဲ အေးတာကိုမှလိုချင်ခဲ့တာ... ချမ်းစိမ့်စိမ့်အရသာလေးကိုမှ သဘောကျခဲ့တာ...။ ခုတော့ ဒါကိုမုန်းတတ်နေခဲ့ပြီ.... အေးစက်စက်ဖြစ်နေတာကို မုန်းနေပြီ... ချမ်းတဲ့ ခံစားမှုကိုမုန်းနေပြီ... နွေးထွေးတဲ့နေရာကို ရှာနေမိပြီ... ပူနွေးမှုကို ဆာလောင်နေပြီ... ပူနွေးတဲ့ နေရာထဲကို တိုးဝင်ချင်နေပြီ...။ အေးစက်စက် ချမ်းစိမ့်စိမ့်ကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ချောင်တစ်ချောင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဖက်... မုန်းတီးစွာနဲ့ပဲကြည့်နေရတယ်...။
ပူနွေးတာကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူး... ပူနွေးတဲ့ အရသာကိုမသိခဲ့ဘူး.. တန်ဖိုးကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး (နားမလည်ချင်ယောင်ဆောင်နေခဲ့တာလဲဖြစ်မှာ) အေးစက်မှုကိုခံစားရတိုင်း... ပူနွေးခြင်းကိုတိုးလို့တိုးလို့တပ်မက်ပြီးနေနေပြီ။
အဝေးက ငါ့အိမ်ကလေးရေ.... ပူနွေးတဲ့အရသာကို ငါကြိုက်နေပါပြီ... ပူနွေးတဲ့ တန်ဖိုးကို ငါသိနေပါပြီ...။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကလေးသိအောင် ငါပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်...။ အိမ်ကလေးရဲ့ ပူနွေးမှုကို အခု ပြန်ရနိုင်ပေမယ့် ငါ ရွေးထားတဲ့ လမ်းအတွက် နောက်ပြန်လှည့်ခဲ့မှာ မဟုတ်သေးဘူးကွယ်...။ အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်ဖို့အေးစက်စက် အချိန်ကာလ တစ်ခုကို ငါ ဖြတ်ကျော်ရဦးမယ်... တိုးတိုးတိုက်တိုက်ပဲ ဖြတ်ကျော်သွားဦးမှာ...။
ခေါင်းမာသော စွန့် ခွာသူ အဖြစ်ပဲ အိမ်ကလေး သိထားပါစေလေ.....။
Posted by sweetpeony at 10:56 PM2comments:
crying loudly in red face,
breaking down tears rain
Posted by sweetpeony at 11:15 PM3comments:
အင်္ဂလိပ်စာမှာ word လို့ ခေါ်တဲ့ စာလုံးတွေမှာ အရှည်ဆုံးစာလုံးပါ။ သိပြီးသားတွေလည်း ရှိသလို မသိသေးတဲ့သူတွေဆိုလဲ သိသွားတာပေါ့။
၄၅ letters ပါပါတယ်။ ဒါက medical term တစ်ခုပါ။ အဆုတ်တစ်ခြမ်းစကာပေါက်ဖြစ်တဲ့ရောဂါပါ။
Pneu = အဆုတ်
mono = တစ်ခြမ်း
ultramicroscopic = အလွန်သေးငယ်သောအပေါက်
silicovolcano = မီးတောင်ပြာများမှ ဆီလီကွန်ကြောင့်
coniosis = ဖြစ်သောရောဂါ
အလွန်သေးငယ်တဲ့ ဆီလီကွန်ပါတဲ့ လေထုကို ရှုမိရာက ဖြစ်ပွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျောက်ထုလုပ်သားတွေ ကျောက်မှုန့် ရှုမိတာမျိုး၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲစဉ် လေထုမှာ ပါလာတဲ့ ဖုန် မှုန့် တွေကို ရှုမိတာမျိုး တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အင်တာနက်မှာရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by sweetpeony at 11:05 AM No comments:
Posted by sweetpeony at 11:37 AM3comments:
ဘယ်သူ့ အတွက်နဲ့ များ
ထွက်လို့ မရနိုင်သေးဘူး .........။
ငါ ပြန်ဖြစ်နိုင်ဦးမလား ...........။
Posted by sweetpeony at 5:00 PM No comments:
Posted by sweetpeony at 9:25 PM 1 comment:
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတခုပါ။ ခုထိမှတ်မိနေတုန်း။ ကလေးအတွေးနဲ့ ပြောလိုက်ပေမယ့် အဲဒီအတွေးက မှန်ကန်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဘာသာယုံကြည်တယ်။ ခုချိန်ထိလက်ခံနေဆဲ......။
အိမ်ကို အမေ့မောင် ဦးလေးတို့ မိသားစု လာလည်ကြတယ်။ စကားတွေပြောနေကြရင်းက ဘယ်ကဘယ်လို ဆက်စပ်သွားတယ်မသိ.. အဒေါ်က အမေကိုပြောတယ်။ သူ့ သမီးကပြောတယ်တဲ့ (သူ့ သမီးဆိုတော့ ကိုယ့်အမ ၀မ်းကွဲပေါ့ ) ကြီးလာရင်ယောကျာ်းမယူဘူးတဲ့။ ပိုက်ဆံရှာပြီး မိဘကိုပဲလုပ်ကျွေးမယ်တဲ့။ အမေက ကောင်းတာပေါ့။ လိမ်မာတာပေါ့ လို့ ပြောရော။ ဒါပဲလား မထူးဆန်းဘူးလို့ထင်မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူး။ အဒေါ်ကအဲ့မှာတင်ရပ်ရင်တော့ တော်သေးတာပေါ့။ သူကဆက်ပြီး အငယ်မလေး (ကိုယ့် ညီမ) ကကောတဲ့။ အငယ်မက အိမ်မှာ လူကြီးတွေ စကားကို ကိုယ့်ထက်ပိုနားထောင်တယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ လူကြီးအကြိုက်ပြောတတ်တယ်။ သူက အင်း မယူဘူးတဲ့။ အမလိုပဲနေမယ်ပေါ့ ပြောတာ။ လူကြီးတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လိမ်မာလိုက်တာ ပေါ့။ ဒါနဲ့ တင်မရပ်သေးဘူး။ ကိုယ်တယောက်ထဲ ကျန်တယ်ဆိုတော့လဲ မျှတအောင်ကိုယ့်ကိုပါ အဲဒီလိုမေးတာပေါ့လေ။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာပြီလေ..... အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲပေးလိုက်တယ်
မ သိ သေး ဘူး
လူကြီးတွေက ဘာကိုမသိသေးတာလဲတဲ့ ပြူးကြည့်ပြီးတော့။ အော် ယူ မယူ မသိသေးဘူး.. မသေချာသေးဘူးလို့ ပြောတာ လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
အဲဒီတော့..... အဲဒီတော့.... အမေက လူရှေ့ သူရှေ့မှာအဲလိုပြောရမလားဆိုပြီး အကြီးမက ဘာ.. ဘာ.. ဘာ.. ဆိုပြီးပြောတော့တာပေါ့။ ဘယ်လိုပြောမလဲ အဲဒီတုန်းကငယ်သေးတာဆိုတော့ သူတို့ စိတ်ထဲမှာနဲနဲကြီးလာတာနဲ့ကျိန်းသေယောကျာ်းယူတော့မှာပဲ သေချာထိန်းမှ ကောင်းကောင်းဆုံးမမှလို့တွေးမိလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ ခုမှစဉ်းစားမိတာပါ။ အဲတုန်းကတော့ ဒါလေးပြောတာဘာမှားလို့ လဲ ဒါလဲဆူတာပဲလို့ တွေးမိတာ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းထဲကတွေးမိတာက မနက်ဖန်မှာတောင် ဘာဖြစ်မလဲမပြောနိုင်တာ.. အဝေးကြီးလိုသေးတဲ့ ယောကျာ်းယူဖို့ မယူဖို့ ကို ဘယ်လိုသေချာမှုမျိုးနဲ့ ပြောနိုင်တာလဲ... ယူမယ်လို့ ပြောပြီး မရနိုင်သေးတာတွေရှိသလို မယူဘူးလို့ ပြောပြီး ယူသွားတဲ့လူတွေလဲတွေ့ နေရတာ... အဲဒီတော့ မယူဘူးလို့ ပြောပြီးမှ ယူသွားရင် ... သူများတွေကပြောကြမှာ တွေ့ လားပြောတုန်းကတော့ မယူဘူးနဲ့ ခုတော့ယူတာပဲ ဆိုပြီး... အဲ ယူမယ်လို့ပြောပြီး မယူဖြစ်ရင်လဲ ပြောကြမှာပဲ လူတွေက.. တွေ့ လားလိုချင်လွန်းလို့ ယူမယ်လုပ်နေတာ ခုထိကိုမရနိုင်သေးဘူး ကြည့်ပါလား ဆိုတာမျိုး အပြောခံရမှာ... ငါလဲဘယ်လိုလုပ်သိဦးမှာလဲ....အဲဒီတော့ မသေချာသေးတာကို မသေချာသေးဘူးလို့ပြောတာပဲကောင်းတယ်လို့ ... အဲလိုလေးပဲတွေးမိတာပါ.... အဲလိုလေးပဲတွေးမိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်မိတာပါ...။
ငါ့လိုပဲအပျိုကြီးလုပ်ကြ ငါနဲ့ တူတူနေလို့ ပြောတတ်တဲ့ အပျိုကြီးအဒေါ်ရဲ့ကလေးတောင် တော်တော်ကြီးလာပြီ။း)
အပျိုကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အမကလည်း ဘယ်အသက်အရွယ်ထိမှမရရင် အပျိုကြီးလုပ်မယ်လို့လစ်မစ်ပြောင်းလာပြီ။း)
Posted by sweetpeony at 11:52 AM 1 comment:
Posted by sweetpeony at 1:21 PM2comments:
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုယ်စား ............ ။
Posted by sweetpeony at 11:35 AM No comments:
သူ့ နှလုံးသား သူပြန်မျှားဖို့ တဲ့
ငါးမျှားချိတ်မှာ တပ်ခဲ့ ........
လှ ပ ကြွ ရွ စွာ ဆင်းသက်လာလိုက်တာ
ငါ့ မှာတော့ ...........
ငါ့ မှာတော့လေ ........... ။
Posted by sweetpeony at 3:19 PM 1 comment:
cool breeze plays your hair,
snow seems like fall from heaven,
foggy morning scenes.
Posted by sweetpeony at 1:19 PM No comments:
for u to calm down,
wash out when ur feeling’s down
by lively laughing
Posted by sweetpeony at 1:18 PM No comments:
come n play with me,
on the colorful bridge there,
built by rains n sun.
Phoenix won’tbdead,
still alive, just like my love
even though u’ve killed
Posted by sweetpeony at 1:17 PM No comments:
snowy foggy night
Santa’s coming to give gifts
Quarantine by isolate,
damp, cold feeling now
Posted by sweetpeony at 1:16 PM No comments:
unrequited love is real
yet, neglect returned
play me, fool me then kill me
as the cast u’ve done
Posted by sweetpeony at 1:15 PM No comments:
sad, glad, love, hatred
feel all of these through the life
Posted by sweetpeony at 1:13 PM No comments:
Posted by sweetpeony at 1:10 PM No comments:
Posted by sweetpeony at 1:06 PM No comments:
မျက်နှာဖုံးတက် ရနံ့ များ
ဒါပေမယ့် သူတို့ က
ငါ - လူစဉ်မမှီချင်နေ
အပုပ်စား သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အနံ့ 
ငါ အော်ကလီဆန်လွန်းလို့ ။ ။
Posted by sweetpeony at 12:57 PM No comments:
rain, thunder, lightning, lonely, messy, windy, da...
raindrops on my roofs, teardrops in my eyes as wel...
burning me my fire, as long as you can be bright, ...
I'maporcupine that plucks its spines from its bo...
come, go, eat, sit, speak do nothing unless you sa...